automatic Key ကိုစက် | မှထုတ်လုပ်သူကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း Taiwan OEM ODM-keymachine.org
automatic Key ကိုစက်
သင်ဒီမှာပါ: နေအိမ်-> ထုတ်ကုန်များ -> Key ကိုစက်များ -> automatic Key ကိုစက်
ကျနော်တို့ကနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာများမှာ Taiwan automatic Key ကိုစက် ထုတ်လုပ်သူ, စက်ရုံ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းနှင့်တင်ပို့သူ။ တည်ငြိမ်တဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပေါ် မူတည်. ထက်သာလွန်အရည်အချင်းကိုနှင့်ကောင်းမွန်သောပြီးနောက်-ရောင်းချဝန်ဆောင်မှုကျနော်တို့စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ဦးဆောင်ထုတ်လုပ်သူများနှင့်တင်ပို့သူများတစ်ဦးအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကိုဖြစ်စေကြပြီ။ ကျွန်တော်တို့ဟာအရည်အသွေးထုတ်ကုန်များနှင့်စျေးနှုန်းအပြိုင်အဆိုင်နှင့်သင်တို့အဘို့အ-on အချိန် delivery မှာကတိပေးပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များနှင့်အတူနှစ်ရှည်စီးပွားရေးထူထောင်ခဲ့ကြပါပြီ။ သင်တို့သည်ငါတို့၏ထုတ်ကုန်မဆိုစံပြအတွက်စိတ်ဝင်စားပါက, အခမဲ့ဖြစ်ကျေးဇူးပြုပြီး ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ.
အထူးဒီဇိုင်းဂဏန်းထိန်းချုပ်မှု key ကိုချမှတ်ခြင်းစက်သာ vise ပြောင်းလဲနေတဲ့အားဖြင့်တစ်ပိုင်းမြို့ပတ်ရထားသို့မဟုတ်စတုရန်း key ကိုလုပ်လိမ့်မည်။
သူတို့၏လိုအပ်ချက်ကိုအပျေါမှာလွတ်လွတ်လပ်လပ်သံသရာအရေအတွက်ထူထောင်ရန်ကွန်ပျူတာ & မစ်အသုံးပြုသူသည်အလိုအလျောက် code ကိုရွေးချယ်ရေးသည်။
တပ်ဆင်ထားပြီးအဖြိုက်နက် carbide ခုတ်။
ရှုထောင်: 126cm (W) * 68cm (ဃ) * 117cm (H)
ဘ 300 ကီလို
GW 350 ကီလို
မော်တော်:3အဆင့်, 1 HP, RPM 1725
380V သို့မဟုတ် 220v, 50 Hz
Key ကို Coding စက်
Automatic Key Machine | Machine Automatique De Clés | Automatische Schlüsselmaschine | Автоматический Ключ Машина | Máquina Automática Da Chave | Macchina Automatico Di Chiavi | स्वचालित मशीन कुंजी | Máquina Automática De Claves | Automatische Key Machine | آلة أوتوماتيكية الرئيسية | Máy tự động chính | เครื่องปุ่มกดอัตโนมัติ | Otomatis Mesin Key | স্বয়ংক্রিয় মূল মেশিন | Otomatik Anahtar Makinası